शीर्ष के हुन् 8 Pizzas इटाली | एक ट्रेन सेव
घर > ट्रेन यात्रा इटाली > शीर्ष के हुन् 8 Pizzas इटाली
पढ्ने समय:6मिनेट(Last Updated On: 07/06/2020)
जो ठाउँ राम्रो यो आविष्कार गर्ने देश भन्दा पिज्जा रमाइलो गर्न, दायाँ? इटालियनहरू प्रेम, प्रेम, यो स्वादिष्ट खाजा-गरिएका-भोज प्रेम! इटाली कुनै आश्चर्य pizzas छन् कला शुद्ध फारम मा गरियो, र अन्तमा छन् यूनेस्को-अनुमोदित!
इटाली वरिपरि रोमिङ, तपाईं 18 औं शताब्दीमा खुलेको पिज्जेरियाहरूमा तर पनि नयाँ पाउनुहुन्छ, पाक एउटा पूर्ण ताजा दृष्टिकोण संग. त्यहाँ आधार विकल्प प्रजातिहरू सयौं छन्, toppings, आकार, र स्वाद. मूलतः, तपाईं कम्तिमा एक पटक पिज्जा भइरहेको छोड्न सक्दैन यो आफ्नो यात्रा समयमा सुन्दर भू-मध्य देश… ल? राम्रो. तपाईंलाई एक पिज्जा प्रशंसक छैनन् भने, इटालियन शेफ तपाईं आफ्नो मन परिवर्तन गर्न पाउनु हुनेछ
हाम्रो सूची तपाईं रोम को शीर्ष निशान रेस्टुरेन्ट दिनेछु, मिलान, फ्लोरेन्स, नेपल्स, र भियना. यहाँ शीर्ष छन् 8 इटाली pizzas.
नोट: नबिर्सिनुहोला सबै सुपर उपयोगी यात्रा अनुप्रयोगहरू डाउनलोड पहिले तपाईं आफ्नो यात्रा सुरु.
Trastevere मा da Vittorio, रोम: एक Adventurous ट्विस्ट संग पिज्जा
इटाली Pizzas यस छानिने मा, तपाईं नमूना भाग लिन सक्छ "Tre Colori पिज्जा।" तीन फरक मसालेदार सामाग्री रातो लागि बनाउन, सेतो र हरियो पिज्जा, बस जस्तै इटालियन झण्डा. को Jalapeno खुर्सानी दिनु छैन प्रयास, मसालेदार सिसिली ससेज, र tangy सेतो चीज आफ्नो मुख बाल्न. तपाईंलाई सारा पिज्जा समाप्त यदि 10 मिनेट वा कम तपाईं एक पुरस्कार जीत. यो नियम बाहेक, तपाईं पनि बढी पिउन सक्दैन 16 पानी को औंस वा बियर. विजेता आफ्नो भोजन मुक्त हुन्छ, एक टी-शर्ट र फोटो प्रसिद्धि को पर्खाल मा पोस्ट. र, तपाईं यसलाई बनाउन छैन भने के हुन्छ? तपाईं जहिले पनि प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, जब तपाईं त यो ठाउँ सम्झना रोम यात्रा.
पिज्जा दा ATTILIO, नेपल्स: पिज्जा को साँचो दयालु
का केही आधारभूत कुराहरूबाट इटाली pizzas बारेमा हाम्रो कथा सुरु गरौँ. धेरै इटालियनहरू विचार Margherita पिज्जा मात्र साँचो प्रकारको. केही ताजा र घर सामाग्री एक अद्भुत पकवान लागि गर्नुपर्छ, स्पष्ट. र यो दा ATTILIO गरेको Margherita आउँदा, तिनीहरूले सही. घर आटा, ताजा टमाटर सस, तेल, र ताजा mozzarella तपाईं आवश्यक सबै छन्. आफ्नो मुख टीन छ भने तपाईं यो पढ्दै हुनुहुन्छ, Da ATTILIO लागि ठाउँ छ. जबकि यसलाई जाँच गर्न निश्चित हुनुहोस् नेपल्स को शहर अन्वेषण.
स्वाद, भियना: डो बनाउने कला
Sapore जहाँ तपाईं सिर्फ एक रेस्टुरेन्ट मा उच्च गुणवत्ता आटा को broadest दायरा पाउन सक्नुहुन्छ ठाउँ छ. Renato बोस्को, इटाली स्थानमा Pizzas यस छानिने को मास्टरमाइंड, इटाली गरेको सर्वश्रेष्ठ रोटी बनाउने एक मानिन्छ विशेषज्ञहरु. तपाईं यहाँ pizzas विभिन्न शैलीहरू प्रशस्त पाउन सक्नुहुन्छ देखि, यो एक degustation मेनु लागि सोध्न महान हुनेछ. यो पनि अन्तिम निर्णय गर्नु अघि विभिन्न आधार विकल्पहरू बारेमा सोध्नु गर्न सिफारिस गरिएको छ. Vegans यो आफ्नो प्राथमिकताहरू मेल खाने pizzas एक प्रशस्त छ देखि सामान्यतया Sapore गरेको प्रस्ताव प्रेम.
मिलान भियना गाडिहरु गर्न
रोम भियना गाडिहरु गर्न
फ्लोरेन्स भियना गाडिहरु गर्न
भेनिस भियना गाडिहरु गर्न
पिज्जा र Brandi, नेपल्स: को 18 औं शताब्दी देखि इटाली मा सर्वश्रेष्ठ Pizzas बीचमा
पिज्जा र Brandi लागि अवधि पिज्जा Margherita coining रिपोर्टअनुसार जिम्मेवार छ. तिनीहरूले यो नाम लिए एउटै नाम को रानी आदर. को पाठ्यक्रम, एउटै सामाग्री संग पिज्जा अघि अस्तित्व, तर यो moniker यो पिज्जा ब्रह्माण्ड मा प्रतिष्ठित गरे. पिज्जा र Brandi फिर्ता तिथिहरु 1870 यो पिज्जेरिया di पिएत्रो नाम अन्तर्गत संचालित गर्दा. यो परम्परा र यो स्थान पछि कथा यो इटालियनहरू लोकप्रिय गरेका छन् र पर्यटक. किन भीडलाई अझै पनि रानी-नाम आनन्द को एक टुकडा लागि भोक यहाँ भेला छ.
पोर्टो नेपल्स गाडिहरु गर्न
सिएना नेपल्स गाडिहरु गर्न
भेनिस नेपल्स गाडिहरु गर्न
ओस्लो नेपल्स गाडिहरु गर्न
ला Taverna पेटू, मिलान: एक आधुनिक पेटू पिज्जा
एक बिट महंगा एक पिज्जा स्थानको लागि, तर यसको भित्री र स्थान एक ठूलो बिल सफाइ गर्न. तैपनि, को पिज्जा पनि स्वादिष्ट छ. यो पिज्जा बक्स बाहिर लाग्छ जो व्यक्तिहरूको छ. Extravagant सामाग्री नयाँ र असाधारण कुरा प्रयास गर्न चुनौती हुनेछ, नेभारा वा समुद्री एक पिज्जा जस्तै. फेरि, एक degustation मेनु ठूलो विकल्प यहाँ छ, यो निर्णय गर्न सजिलो छैन देखि के टिप्न. यसबाहेक, इटाली सबैभन्दा अन्य pizzas विपरीत, यो एक डाइजेस्ट गर्न साँच्चै सजिलो छ.
पोर्टो मिलान गाडिहरु गर्न
नाइस मिलान गाडिहरु गर्न
भेनिस मिलान गाडिहरु गर्न
आईएल Trapizzino, रोम: केही साना विभिन्न
आईएल Trapizzino कुनै पनि पिज्जा प्रेमी को लागि एक वास्तविक आश्चर्य छ. इटाली अन्य pizzas गर्न Contrasting, pizzas यहाँ त्रिकोणात्मक स्यान्डविच जस्तै हेर्न. केही तिनीहरूलाई भरी pizzas कल. यी भरी ट्यूटोरियल भित्र तपाईं धमाकेदार चिकन जस्तै सामाग्री पाउन सक्नुहुन्छ, बैगुन र रातो अक्टोपस. आटा धेरै उज्यालो छ, अनुमति दिन्छ जो तपाईं दुई वा तीन टुक्रा खान. यो सानो, Testaccio को पडोस मा आरामदायक ठाँउ सधैं मान्छे भरिएको छ. त्यसैले तपाईं राम्रो अग्रिम आरक्षण कम्तिमा केही घण्टा बनाउन.
रोम गाडिहरु गर्न ट्रियस्टे
रोम गाडिहरु गर्न सिएना
लास्पेजीया रोम गाडिहरु गर्न
पिज्जा AM, मिलान: A Place Where You Can Eat in the Cue Pizzas In Italy
यो इटाली मा सबै भन्दा राम्रो-ज्ञात Pizzas मध्ये एक छ र यो मिलान छ. यसरी, तपाईं बाहिर प्रतीक्षा मानिसहरूको लाइन देख्न यदि छक्क छैन दोकान. Cues मा पिज्जा हुन्छु नियमित कुरा हो. तिनीहरूले तपाईंलाई कही जान चाहनुहुन्छ देखि छैन, तपाईं प्रतीक्षा गर्दा मालिक तपाईं सानो पिज्जा स्लाइस प्रस्ताव गर्नेछ. तपाईं इटालियन सेतो एक गिलास प्राप्त गर्न सक्छन् रक्सी धेरै. तिनीहरू एउटा सानो मेनु छ, संग मात्र3पिज्जा प्रकार. हे, तपाईं चिन्ता छैन – तिनीहरू सबै अद्भुत छन्, ताकि तपाईंले सबै बञ्चित छन् जस्तो महसुस हुनेछ.
ट्रियस्टे मिलान गाडिहरु गर्न
पेरुगिया मिलान गाडिहरु गर्न
मिलान गाडिहरु गर्न लेक्से
सिम्बायोसिस जैविक पिज्जा, फ्लोरेन्स: एक स्वस्थ इटाली Pizzas मा लिनुहोस्
मामला मा तपाईं एक लस मुक्त-Pizzas इटाली मा देख रहे, अर्गानिक मा सिम्बायोसिस फ्लोरेन्स तपाईं सम्झनुपर्छ नाम हो. धेरै शाकाहारी विकल्प पनि छन्, तर समग्र, हरेक पिज्जा अचम्मको स्वाद! सबै जैविक सामाग्री देखि बनेको छ, यो पिज्जा एक बिट बनाउने अरूलाई भन्दा स्वस्थ. आटा धेरै बाक्लो छ, जो सबैको स्वाद पछि हुन सक्छ. तर – सबैलाई सम्पूर्ण पिज्जा खान धनी भर्ने जो तपाईं चुनौती प्रेम हुनेछ! तपाईं यो सबै खान सक्नुहुन्न भने, बाँकी के प्याक र भोलिको लागि यसलाई सुरक्षित. यो अझै पनि स्वादिष्ट स्वाद हुनेछ.
फ्लोरेन्स गाडिहरु गर्न लेक्से
रोम गाडिहरु गर्न बारी
त्यसैले त्यहाँ तपाईँले छ. यो इटाली शीर्ष pizzas हाम्रो विकल्प थियो. यति धेरै रेस्टुरेन्ट भ्रमण गर्न, र स्वाद यति धेरै फरक भेरिएसनहरूमा! तथापि, यी सुझावहरू मात्र थिए. तपाईं पक्कै पनि धेरै पाउन सक्नुहुन्छ थप स्थानहरू स्वादिष्ट पिज्जाको साथ इटाली वरिपरि आफैलाई. तपाईं जो निर्णय कुनै पनि मद्दत गर्न आवश्यक छ भने तरिका छ यात्रा को लागि सबै भन्दा राम्रो इटाली, हामीलाई भ्रमण www.saveatrain.com. गर्न मद्दत गर्न हामी खुसी भन्दा बढी हुनेछ! तपाईंको रेल प्याक पूर्व-यात्रा अनिवार्य यात्रा, हामीलाई एक कल दिन, र साहसिक सुरु गरौं!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र सिर्फ एक हामीलाई एक क्रेडिट दिन लिङ्क(www.saveatrain.com) यो ब्लग पोस्ट गर्न, वा यहाँ क्लिक: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/top-8-pizzas-italy/ - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml र तपाईं परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ / यो / tr वा / fr र अधिक भाषा.
#italypizza #पिज्जा #pizzas italia यात्रा